तीन दिनदेखि सर्भर नचलेको भन्दै सवारी चालक अनुमति–पत्र ‘लाइसेन्स’ शाखाको सेवा ठप्प, सेवाग्राही मारमा - VON TV
३१ असार २०७६, मंगलवार ११:४३ 242 ??? ???????
यातायात ब्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति–पत्र लाइसेन्स शाखाको सेवा विगत ३ दिनदेखि ठप्प रहेको छ । मंगलबार यातायात कार्यालय गण्डकी सेवाग्राही तथा कर्मचारी विहीन भएको छ । यातायात ब्यवस्था विभागको कम्प्युटरको सर्भर नचलेको भन्दै आइतबारदेखि बन्द रहेको यातायात गण्डकीको कार्यालय मंगलबार पनि सुचारु हुन सकेन ।
गण्डकी प्रदेशको सवारी चालक अनुमति¬–पत्र लाइसेन्स वितरण गर्ने एक मात्र कार्यालय नचल्दा हजारौ सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । इडिएलभिआर सिस्टममा आएको प्राविधिमा समस्या भएको कारण सर्भर नचलेपछि मनाङ मुस्ताङ लगायत कास्की भन्दा बाहिरी जिल्लाका सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमति–पत्र लिनकै लागि हप्तौं कुर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
आइतबार देखि सेवा दिन नसकेको भएता पनि कार्यालयले सर्भर नचलेको भनेर कुनै पनि सूचना निकालेको थिएन जसका कारण सेवाग्राहीहरुले दिनभरी नै सास्ती ब्यहोर्नु परेको थियो । सोमबार पनि सेवाग्रहीहरुले आफ्नो समय यातायात परिसरमा बिताए तर, सेवा लिन पाएनन् ।
यसरी सर्भर नचलेपछि फाराम दर्ता, नबिकरण, प्रतिलिपि, राजश्व संकलन लगायतका काम ठप्प हुँदा हजारौ सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । तरपनि यातायात ब्यवस्था कार्यालयले कुनै बैकल्पिक बाटो अपनाउन सकेको छैन । मंगलबार भने कार्यालयले सूचना टाँस गरेर सर्भर नचलेका कारण सेवामा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा मागेको छ ।
एकातिर बाहिरका सेवाग्राहीका लागी समय र पैसाको फजुल खर्च हुने गरेको र अर्कातर्फ यातायातको सर्भर नचल्दा नविकरणमा समस्या आएको छ । नविकरणका लागी आएका सेवाग्राहीहरुको अन्तिम समयमा कार्यालयको सर्भर नचल्दा जरिवानाको चपेटामा परेका छन् ।
यातायात ब्यवस्था कार्यालय गण्डकीका लाइसेन्स शाखा प्रमुख हरी प्रसाद गौतमले सेवा कहिले सूचारु हुने हो एकिन गर्न नसकिने बताएका छन् । न बिकल्प दिन सक्ने न त काम अगाडि बढाउने भन्दै कार्यालयका कर्मचारीहरु दिनभर सुतेर बसेका छन् ।
यसरी गण्डकी यातायात कार्यालय बिगत केही दिन देखि अस्तब्यस्त रहेकाले सेवाग्राहीले मर्का ब्यहोर्नु परेको छ । आखिर कहिले सम्म ? आम सेवाग्राहीको प्रश्न रहेको छ ।
गौरिकालाई ‘६५ लाख’, स्वर्ण विजेता पुरुष फुटबल टिमलाई ‘एक करोड २४ लाख’ पुरस्कार
रोहिंग्याहरुको सुरक्षित गन्तब्य बन्दै नेपाल , ३० हजार टाकामा नेपाल भित्रिन्छन् रोहिंग्या
सुटुक्क भारतीय दुताबास छिर्ने सशस्त्रका डिआइजी परे कारबाहीमा
टेलिभिजन पत्रकारलाई नेपाल पुलिसको दुर्व्यवहार, हामी पुलिस आचरणको छानबिन गर्न चाहन्छौं – अन्तराष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे)
माता बंगलामुखिले सबैको कल्याण गरुन,मंसिर२६ गते बिहीबार\_डिसेम्बर १२ तारिखको राशिफल
आज किराँतले उधौली र नेवार समुदायले योमरी पुन्हि पर्व मनाउँदै
पोर्तुगाली नागरिकताका लागि दिएका १ लाख ७२ हजार आबेदनहरु छानबिनका लागि पेण्डिङ्
‘जलपरी’ गौरिकाले ५६ लाख पाउने !
साग विजेतालाई प्रधानमन्‍त्रीले दिए सरप्राइज -कसले कति लाख पाउने भए ?
शहर सफा राख्न ” फोहोरलाई फोन गर ” च्यालेन्ज अभियान